Dhammaan wixii ku saabsan cusub Oneplus 5: qeexitaannada farsamada iyo qiimaha | Androidsis
Sameeyaha taleefannada casriga ah ee OnePlus ayaa ugu dambeyn soo bandhigay calankiisa cusub toddobaadkan, OnePlus 5, qalab cajiib ah oo leh shaashad 5.5-inji ah iyo nidaamka hawlgalka mobilada ee Android 7.1.1 Nougat.
The OnePlus 5 waxaa loo soo bandhigay qayb ka mid ah dhacdooyinka tabinta tooska ah waxaana ku tilmaamay wakiilada shirkadda inuu yahay midka ugu khafiifsan moobaylka abid iyaga sameeya. Qalabka wuxuu bixiyaa a laba kamaradood toogashada sawir fiiqan oo leh saameyn HDR oo hagaagsan, iyo sidoo kale nidaamkii ugu dambeeyay ee hawlgalka Android Nougat (lakabka habeynta OxygenOS), iyo qeexitaanno aan caadi aheyn oo aan hoos kusoo bandhigno.
Tikniyoolajiyadda Dash Charge waa muuqaal kale oo aad u xoog badan oo ka mid ah OnePlus 5, tikniyoolajiyad lacag-ku-qaadis ah oo awood u leh inay ku siiso ilaa maalin madax-bannaanida ka dib 30 daqiiqo oo lacag bixin ah.
1 OnePlus 5 qeexitaan farsamo
2 Qiimaha OnePlus 5 iyo helitaankiisa
OnePlus 5 qeexitaan farsamo
Barnaamijka OnePlus 5
OnePlus 5 wuxuu ku faanaa shaashad taabasho leh 5.5-inch Optic AMOLED oo leh qaraar HD 1080p buuxa (1920 x 1080 pixels), 16 milyan oo midabyo ah iyo Corning Gorilla Glass 5. daahan, sidoo kale, Terminalka cusub wuxuu isboortiga ku shaqeynayaa processor-ka Qualcomm MSM8998. Snapdragon 835 kaas oo ay weheliso 2.45 GHz Kryo octa-core CPU iyo a GPU Adreno 540. Intaa waxaa dheer, moobaylka wuxuu ku daraa RAM LPDDR4X of 8GB qaybtiisa madow ee Midnight, iyo 6GB RAM oo ah nooca Slate Gray.
Qiyaas ahaan 7.25mm qaro weyn, OnePlus 5 ayaa keena a laba kamaradood xaga dambe (16 MPx f / 1.7 + 20 MPx f / 2.6) iyadoo la adeegsanayo wajiga ogaanshaha autofocus iyo LED flash, duubista fiidiyowga ee 2160p tayo leh 30 wareeg sanadkiiba, iyo sidoo kale a 16 megapixel kamarad hore iyo duubista 1080p.
Marka laga hadlayo isku xirnaanta, OnePlus 5 ayaa keena Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Toos ah, DLNA, Taageerada Hotspot, Bluetooth 5.0 A2DP LE, oo lagu dhisay GPS leh A-GPS, GLONASS iyo BDS iyo isku xira USB Type-C 2.0.
Dash Charge ee OnePlus 5
OnePlus 5 waxaan sidoo kale kaheleynaa a faraha akhristaha hore, iyo sidoo kale dareemayaal ku dhow, gyroscope, accelerometer, compass dijitaal ah iyo batteri aan laga saari karin 3300mAh oo leh tikniyoolajiyadda Dash Charge.
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah faa'iido darrooyinka ugu weyn ee OnePlus 5 uu yahay la'aanta booska loogu talagalay ballaarinta xusuusta, inkasta oo qaybtiisa Madoow ee Saqda dhexe oo 8GB RAM ah uu terminalku keenayo 128GB xusuusta gudaha, halka qaabka 'Slate Gray' oo leh 6GB RAM uu keenayo 64GB booska keydinta xogta. Hoos waxaad kaheleysaa jadwal faahfaahsan oo leh dhammaan astaamaha OnePlus 5:
Screen 5.5-inji Optic AMOLED
Xallinta 1080P Full HD (1920 x 1080 pixels) 401ppi
Dabool galaaska 2.5D Corning bakhtiyo Glass 5
processor Qualcomm Snapdragon 835 (siddeed xuddun / 10 nm / illaa 2.45 GHz)
Kaydinta 64 / 128GB
Cámara trasera 16MP xagal ballaaran (f / 1.7 + autofocus) + 20MP Telephoto (F / 2.6 + autofocus) + Dual LED Flash
Kaameerada hore 16 megapixels (f / 2.0)
Duubista fiidiyaha 4K at 30fps / 1080p at 60fps / dhaqdhaqaaq gaabis ah (720p at 120fps)
Sensors Dareeraha sawirka faraha + Dareeraha Hall + Accelerometer + gyroscope + sensor dhawaanshaha
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.0 + NFC + Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac Dual Band
Dekadaha USB-C + 3.5mm maqalka maqalka + Dual nano-SIM booska
Batariga 3300mAh oo leh Dash Charge
Cabbirada X x 152.7 74.7 7.25 mm
Nidaamka hawlgalka Android 7.1.1 Nougat oo leh interface OxygenOS
Qiimaha 559 euro oo loogu talagalay Midnight Black (8GB RAM + 128GB) / 499 euro oo loogu talagalay Slate Gray (6GB RAM + 64GB)
Qiimaha OnePlus 5 iyo helitaankiisa
The OnePlus 5 waxaa lagu iibin doonaa websaydhka soo-saaraha laga bilaabo Juun 27, inkasta oo hadda si toos ah looga iibsan karo dukaamada New York, London, Berlin, Paris, Amsterdam, Helsinki iyo Copenhagen
Nooca OnePlus 5 Saqbadh Madow (oo leh 8GB RAM iyo 128GB kaydinta) ayaa lagu iibin doonaa 559 euros, halka nooca Slate Grey (oo leh 6GB RAM iyo 64GB oo keyd ah) ayaa ku kici doona 499 euros.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » Dhammaan wixii ku saabsan cusub Oneplus 5: qeexitaannada farsamada iyo qiimaha